Dowladda Qatar oo soo dhaweysay deyn-cafinta Soomaaliya - Hargeele - Wararka Somali State
Dowladda Qatar oo soo dhaweysay deyn-cafinta Soomaaliya
Dowladda Qadar ayaa soo dhoweysay go’aanka Hay’adda Lacagta Adduunka iyo Bangiga Adduunka ee la xiriiray arrimaha deyn cafinta Soomaaliya, si loo dhiirigeliyo waddamada la dhibaateysan deymaha.
Dowladda Qadar waxay carrabka ku adkeysay in go’aankani yahay tallaabo muhiim ah oo Soomaaliya hore u qaaday si ay u gaarto xasillooni iyo barwaaqo.
Dowladda Qadar ayaa ugu hambalyeysay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed go’aankan iyo dadaallada degdegga ah ee ay sameeyeen si ay u gaaraan marxaladdan deyn bixinta ah.
Bayaan ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qadar soo saartay ayaa lagu yiri” Dowlada Qadar waxay waligeedba aheyd mid ku faanta dadaalada horumarineed ee ka socday Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay, isla markaana waxay la shaqeysay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed, iyada oo loo marayo waddooyinka horumarineed ee maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo in la abuuro fursado shaqo si loo helo xasilooni iyo horumaro mustaqbalka.
Bayaanka ayaa intaa ku daray in go’aankan muhiimka ah uu billoow u yahay marxalad cusub oo u soo hoyatay Soomaaliya, sidoo kalena Qadar ay sii wadi doonto garab istaagga shacabka Soomaaliyeed ee hiigsanaya mustaqbal wanaagsan iyo barwaaqo.
Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare oo meel mariyay Hindise-sharciyeedka Xafiiska Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka “SAWIRRO”
Qaar ka mid ah Dhaawacyada Qarixii Shalay oo iminka laga qaadayo Garoonka Magaalada Muqdisho.